DIDIN’NY BESANDRY ATAON’NY FRANTSAY : Miantso ny Loholona hivory maika ireo fikambanana miaro ny Nosy Malagasy
Miantso ireo Loholona hivory maika hanao valy bontana ho an’ny Frantsay ireo fikambanana sy antoko politika mivondrona, mitaky ny hamerenana ireo Nosy Malagasy, izay ahitana ny Antoko otrikafo, APM, Alefa ary FLN. 10 septembre 2020
Tonga nanatitra taratasy fangatahana teny amin’ny Antenimieran-doholona izy ireo, omaly.
Nambaran’izy ireo nandritra izany fa : "tokony hodinihin’ireo Loholona faran’ izay maika ny fanapahan-kevitra navoakan’ ny Antenimieran-doholona Frantsay hibodo tanteraka ireo Nosy Malagasy izay nogiazan’ izy ireo hatramin’ ny Fanjanahantany". Tsiahivina fa ny 2 septambra 2020 lasa teo no nanapa-kevitra ny Antenimieran-doholona frantsay fa : “tsy azo eritreretina ny hamerenana amin’ i Madagasikara ireo Nosy manodidina”.
Nilaza ireto fikambanana sy antoko politika ireto fa : “ mahatsapa ry zareo fa manamafy ny fibodoany tanteraka ireo Nosy Malagasy ny Frantsay, ka tokony hihetsika ny andrim-panjakana sy ny Mpitondra eto amintsika. Amboletra ka tsy azo leferin’ ny Malagasy tena tia tanindrazana velively izany”, hoy ny fanambaràna.
Mitory fahalemena ny fahanginana
Nambaran’ izy ireo koa fa ny fahanginana dia toa mitory fanamaivanana na fahalemena na firaisana tsikombakomba asehon’ ny Fitondrana hatramin’ izao, eo anatrehan’ ireo fihantsiana ady ankolaka ataon’ ny Fanjakana frantsay amin’izao. Mba ho taratry ny hambompom-pirenena ary ny firaisankinan’ ny vahoaka manohitra ny finiavan’ ny vahiny hamerina ny fanjanahantany, ireto antoko sy fikambanana ireto dia namoaka fanambaràna fa : “tokony hapetraka ho lahadinika maika amin’ ny fivorian’ ny Antenimieran-doholona malagasy ny valy bontana hasetry io fanapahan-kevitry ny Antenimieran-doholona frantsay io".
"Tokony hatsangana ny vaomiera manokana maro lafy izay afaka hijoro ka ho sarotiny mafy amin’ ireo Nosintika. Tokony hatevenina ny fangatahana fanohanana avy amin’ ny Firenena na vondrom-paritra ivelan’ ny Fanjakana Malagasy”, hoy ny fanambaràn’izy ireo.
Mbola hanatitra fangatahana eny amin’ny Antenimieram-pirenena
Nanamafy koa ireto fikambanana sy antoko politika ireto fa mbola hanatitra fangatahana eny amin’ny Antenimieram-pirenena izy ireo. "Fanitsakitsahana ny Firenena, fanambaniana ny Malagasy ny fibodoana ireo Nosy ireo. Efa nanapa-kevitra ny Fitondram-panjakana fa hitaky ireo Nosy ireo alohan’ny 26 Jona 2020 saingy nisy ity valanaretina ity ka nohararaotin’ny Frantsay.
Mila manambatra hery isika. Ajanony ny tsy fitovian-kevitra ara-politika fa andao ny tombontsoam-pirenena no hojerena. Ny an’ny Firenena frantsay na miady sy tsy mitovy hevitra aza ny andaniny sy ankilany rehefa ho an’ny tombontsoam-pireneny dia miara-miady izy ireo", hoy kosa ny filohan’ny antoko APM, raha nametraka ity taratasy ity tao amin’ny Antenimieran-doholona, io omaly io. Nanamafy izay voalaza izay ny sekretera jeneralin’ny otrikafo, Elia Rabevahiny, raha nilaza fa : "ny rafi-panjakana amin’ny ankapobeny mihitsy, manomboka any amin’ny ambony indrindra ka hatrany ifotony no tokony hihetsika vantany vao nivoaka io fanapahan-kevitry ny Antenimieran-doholona frantsay io".